शैक्षिक सत्र असोजसम्म सार्न शिक्षा बिद वाग्लेको सुझाव - Kanchan Aawaz
कन्चन आवाज२०७७ फाल्गुन १०, सोमबार १५:०९ गते
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अस्त व्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किएको छ । तर, लकडाउनका कारण खल्बलिएको यस वर्षको शैक्षिक सत्र चैत–बैशाखमै पूरा हुने स्थिति छैन । चालु शैक्षिक सत्र कहिलेसम्म जारी राख्ने भन्नेबारे शिक्षा क्षेत्रमा बहस जारी छ ।
सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सरकारको यो निर्णयबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले जेठमा विद्यार्थीहरुको पढाइ पूरा नहुने भन्दै यस वर्षको शैक्षिक सत्र असोजसम्म लम्ब्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
चालु शैक्षिक सत्र जेठ मसान्तमा पूरा गरेर असारदेखि अर्को शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने सरकारको निर्णय कत्तिको उचित हो ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर शिक्षाविद् डा. वाग्लेसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–
यो वर्षको शैक्षिक सत्र असारबाट सुरु गर्ने निर्णय सही छ ?
विद्यार्थीलाई पढाएको, सिकाएको कुरा सबै सिकुन्, जानुन् भनेर बनाएको समय हो शैक्षिक सत्र । कोरोना महामारीले प्रभावित पारेको यो वर्ष विद्यार्थीले पाठ्यक्रममा भएको कुरा सिक्न पाउन्, सकुन् भनेर निर्धारित गरेको समय हो ।
यो वर्ष विद्यार्थीले पढ्न, सिक्न पाएकै छैनन् । माघसम्म पनि सबै विद्यार्थी शिक्षासँग नजोडिएको अवस्थामा जेठसम्म विद्यार्थीले कसरी सिक्छन् ? त्यसमा पनि सार्वजनिक विदाहरू कटौती गरिएका छैनन् । शिक्षकले लेखेको कुरा भट्याउने मात्रै अनि विद्यार्थीले सिक्ने समय खै ? त्यसैले यो निर्णय गलत हो । यो निर्णयले त झनै समस्या बढाउँछ ।
कस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ ?
शिक्षकले कक्षाकोठामा भट्याउने अनि तिम्रो पढाइ पूरा भयो भनेर सक्ने । अनि अर्को कक्षा चढाउने देखिन्छ । यसले शैक्षिक सत्रको अर्थ नै अर्को कक्षामा चढाउने मात्रै जस्तो देखिन्छ । मैले अघि पनि भनेँ शैक्षिक सत्र भनेको पढाएको कुरा विद्यार्थीले सिकुन् भनेर दिइने समय हो ।
अहिले दुई महिना पछाडि धकेलिएको छ । विद्यार्थीले पढेको कुरा सिक्ने समय नै दिइएको छैन । पाँच महिनामा शिक्षकले भट्याउन मात्रै सक्छ । त्यसमाथि सार्वजनिक विदाहरू यथावत राखिएको छ । त्यसले गर्दा सिक्ने समय रहेन । विद्यार्थीले सिक्ने कुरा नसिकेपछि स्वतः समस्या हुन्छ । अहिलेको कमजोर सिकाइले अर्को वर्ष असर गर्छ । अझ भनौं वार्षिक रुपमा कमजोर बनाउदै लैजान्छ ।
त्यसो हो भने यो वर्षको शैक्षिक सत्रलाई के गर्न सकिन्थ्यो ?
विद्यार्थीलाई पढाउने मात्र होईन, सिकाउनुपर्छ । पाठ्यक्रममा भएको विषयलाई पढाउँदै सिकाउनुपर्छ । त्यसको लागि समय आवश्यक पर्छ । यो वर्ष विद्यार्थीले त्यो समय पाएका छैनन् ।
सरकारले तीन वर्षको शैक्षिक सत्र–योजना बनाउनुपर्थ्यो । मैले भन्दै आएको छु–यो वर्षको शैक्षिक सत्र असोजमा, अर्को वर्षको शैक्षिक सत्र साउनमा र त्यसपछिको वर्ष बैशाखमा ल्याउनुपर्छ । त्यसरी तीन वर्षे शैक्षिक सत्र–योजना बनाउँदा ठीक हुन्थ्यो ।
माघमा विद्यालय खोलेर जेठमा पढाइ सक्छु भनेर हुँदैन । सार्वजनिक विदा पनि यथावत राखेर दुई महिनापछि धकेल्नुको अर्थ छैन ।
शैक्षिक सत्र लगातार दुई वर्ष पछाडि धकेल्दा विदेश जाने विद्यार्थीहरू कसरी जाने ?
पहिलो कुरा त यो महामारीको असर हामीलाई मात्रै होइन । अमेरिका लगायत देशहरूले पनि शैक्षिक सत्र पछाडि धकेलेका छन् । दोस्रो कुरा, हामीले नेपालमा नै पढ्न मन लाग्ने वातावरण बनाउने हो । हाम्रो शिक्षा स्तरीय बनाउने हो ।
तेस्रो, विदेश पढ्न जानेहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ सिक्नयोग्य बनाएर पठाउनुपर्छ । हामीले यहाँ पढाउने, सिकाउने नाममा भट्टयाउने मात्र गरेर त हुँदैन ।
व्यवहारिक सिकाइमा जोड दिएको भए जेठ वा चैत्रमै शैक्षिक सत्र सकिने सम्भावना थियो ?
त्यस्तो गर्न सकेको भए सम्भव थियो । तर, हाम्रोमा त्यो पद्दति छैन । कक्षा ११, १२ मा जीवनपयोगी शिक्षालाई अनिवार्यबाट हटाएर विकल्पको रुपमा ल्याएको छ । सरकारले उल्टो काम गरेको छ । विद्यार्थीलाई पढाउने मात्रै काम हुन्छ । सिकाउन त शैक्षिक सत्रको समय थपिनै पर्छ ।अनलाइन खबर बाट